GREENHOUSES "INNOVATOR - MAXI", "MINI" - SHARAXAAD FAAHFAAHSAN - DHISMAYAASHA
Greenhouses "Novator" - Kaaliyeyaashaada lagu kalsoon yahay ee xagaaga xagaaga
Buulal yar yar waa qurux badan beddelan si weyn iyo koriyo qaali ah, taas oo mararka qaar ay adagtahay in la helo meel ku haboon meelaha yar ee magaalooyinka.
Barafyo yar yar fududahay in lagu rakibo, mobile, leeyihiin xadidan kharash yar. Thanks to tayadaas, waxay sii kordhayaan caan u ah beerta.
Mid ka mid ah kuwa ugu habboon in la isticmaalo iyo waqti isku mid ah lagu kalsoonaan karo waa aqalka dhirta lagu koriyo. "Innovator".
"Innovator - Maxi"
Waxaa loo abuuray codsadaha mulkiilayaasha yaryar ee aan awoodin inay ku rakibaan iyaga oo qaab dhismeedka caan ah sida koronto-dhajiye joogta ah. Haysashada dhammaan sifooyinka ilaalinta ee aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo "Innovator - Maxi" waa sahlan tahay in la rakibosi fudud u guurto meel cusub.
Isla mar ahaantaana waxaay qadarin kartaa tiro dhir ah oo dhir ah. Haddii aad soo iibsato dhowr nuqul oo ka mid ah naqshadahan, ka dibna mid kasta waxaa loo isticmaali karaa nooca khudaarta ama geedo sii kordhaya.
Fiican taam ah moodooyinkan si loo kordhiyo dhammaan dalagyada kulaylka jecel; yaanyada, qajaarka, basbaaska, ukunta.
Faa'iidooyinka tusaaluhu waa:
Suurtogalka ah in la rakibo iyada oo aan la isticmaalin qalab gaar ah.
Awood dhisme sare.
Caawinta daryeelka ee dhirta, thanks to design of daboolka.
Frame laga sameeyey profile profile 20H20, oo leh dhoobo budada polymer, oo leh iska caabin aad u sareeya ee saamaynta deegaanka. Saldhigga aqalka dhirta lagu koriyo ayaa lagu rakibay 1 saac oo kaliya, dhammaan qaybaha looga baahan yahay kuleylka ayaa lagu daraa bixinta.
Dabool laba-dhinac ah - mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee tusaalaha. Habka furitaanka ayaa si gaar ah ugu haboon daryeelka daryeelka dhirta. Naqshad dhejis ah oo muuqaal ah ayaa wax ku kordhisa kala firdhinta qorraxda taas oo saameyn ku leh xaaladda dhirta. Intaa waxaa dheer, foomkan waxay bixisaa qulqulaad biyo ah oo wanaagsan inta lagu jiro roobka.
Novator - Maxi kuleyl ayaa leh cabbiraha soo socda:
1.1 m ballaaran
dhererka - 2.1 m.
dhererka - 1.2 m.
Daboolka sare ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu bixiyaa laba doorasho: polycarbonate ama Agrotex 60.
Waxaa ku jira rakibid hagaajinta qallalan, iyada oo aan hore u rakibin aasaaska.
"Innovator - Mini"
Qodobada hore ee qaabka hore ee dhererka yar (0.8m), sidaa daraadeed waa wax ku haboon. for geedo sii kordhaya ama khudaarta faaqidaad. Sidoo kale "Innovator - Mini" - naqshad wanaagsan ee qajaarka sii kordhaya. Qoto dheer iyo dhererkani waa mid la mid ah qaabka Maxi.
Sababtoo ah heerka sareeya, gudaha gudaha qaabkani wuxuu si dhakhso ah ugu kulmaa bilawga maalmaha ugu horeeya ee kuleylka iyo qoraxda.
Buulka lagu koriyo ayaa ku habboon geedo sii kordhaya.
Intaa waxaa dheer, gabbasho ah "Novator - Mini" daboolka daboolka ah. Nalalka modelka ah (20 kg), oo aan la burburin, waxaa lagu kaxeyn karaa baabuur rakaab ah.
Iyadoo bilawga yar yar dhaxan waxaa si sahlan loo dabooli karaa wixii intaa ka dheer si loo ilaaliyo geedo la googooyo laga bilaabo qabow.
Frame laga sameeyey profile profile budada la rinjiyeeyey ama tuubooyinka galaafaysan. Daynka ayaa laga sameeyey polycarbonate. Xirmada waxaa ka mid ah dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay ee loogu talagalay kiniisadda, sidaas darteed aqalka dhirta lagu koriyo waa mid fudud in la rakibo.
Qeybta oo dhan waxay ka kooban tahay 8 tubo, afar qaybood oo loogu talagalay rakibidda, xirmooyinka naqshadaha is-xoqida, gacanta. Si sahlan ee kullamadu waxay ku dhejisaa tilmaamaha faahfaahinta warshadaha
Sidoo kale boggayaga waxaa ku yaal maqaalo badan oo ku saabsan noocyada lagu koriyo: Akhriska, Dayas, Gherkin, Snail, Breadbox iyo dhaqamada kale.
Sifooyinka dhismaha lagu koriyo
Kulanku wuxuu ku bilaabmayaa saldhigga aasaasiga ah. Qalabka birtu wuxuu ku xiran yahay nalka. Qaybaha dusha sare ee duugoobay waxay ku xiran yihiin kuna xiran yihiin polycarbonate. Kadibna waxay ku biiraan baararka iskutallaabta ah: laba hoose iyo hal sare ee qaybta dhexe ee aqalka dhirta lagu koriyo.
Ka dib ayaa la soo saaray dabooli(ama laba dabool loogu talagalay nooca "Maxi"). Diyaargarowga lagu daboolayo daboolka polycarbonate daboolka waxaa lagu beeray on dhirta gaarka ah ee saldhiga aqalka dhirta lagu koriyo. Faleenka ayaa lagu dhejiyaa saldhigga.
Arrimaha qaarkood ee shirarka saxda ah:
Dhibaatada ugu weyn ee kulanku waa Kulan qaldan ayaa lagu soo koobay. Haddii aad jahwareeriso dhinaca iyo boodhadhka sare, cabbirka daboolka iyo saldhiggu ma eegi doono. Saldhiguhu waa boodbood gaaban, iyo daboolka - dheer. Gumpers kasta wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, isku xiraya, waxaad u baahan tahay inaad isbarbardhigto dhererka iyo hubi haddii godadka la ciyaarayo. Isku dheelitirnaanta wax ka badan 4 mm waxay keeni kartaa saqafka oo u egtahay mid aan habooneyn.
Gobollada si loo xaliyo aqalka dhirta lagu koriyo dhulka waa lagama maarmaan si adag u dhighaddii kale, qaabdhismeedka oo dhan wuu ogyahay, daboolkuna ma xirnaayo.
Ha isku dayin inaad ku haboonaato daboolka. Nadiifinta 2-5 sentimitir waa la bixiyaa ee hawo-qaadashada gudaha gudaha.
TALO. Wixii koronto ee adeegga dheer ee gudaha xilliga jiilaalka Daboolka xir. Si joogto ah u nadiifi dusha sare ee barafka.
Greenhouses "Novator" wuxuu noqon doonaa kaaliyeyaashii lagu kalsoonaan lahaa ee beerista dalagyada beerta kala duwan ee ku yaal goobtaada iyo dayactir haboon ayaa kuu adeegi doona sanado badan.
Sawirro intaa ka badan oo lagu koriyo: